Maxaan u tartamaya? - Pine for BET
Maxaan u tartamaya?
Waxaan ahay Pine Salica, iyaga, waxaanan u ordayaa Guddiga Qiyaasta iyo Canshuuraha. Waxaan aaminsanahay inaan u istaago sidii aan shaqada u qaban lahaa. Kama baqayo inaan su’aalo ka keeno fikradaha asaasiga ah ee go’aammada salka ku haya oo aan u dhaqaaqo sameynta wax sax ah. Dawladnimadu waa geedi socod, ee ma aha natiijo.
Waxaan leeyahay asal hubinta tayada iyo adeegga macmiilka dawladda gobolka. Waan ogahay in iyada oo aan tayo lahayn – iyada oo aan qof hubin in aan laba jeer hubinnay wax kasta oo jidka ah iyo in badeecaddu ay badbaado tahay oo ay samayso waxa ay leedahay – waxba ma haysid. Dawladnimada, tayadu waxay u baahan tahay kalsooni. Waxaan u shaqeeyaa si aan u kasbado kalsoonida dadka aan caawinayo anigoo si toos ah ula xiriiray, iyo inaan hubiyo inaan sida ugu cad u sheegi karo macluumaadka ay u baahan yihiin.
Kuraasta waaweyn ee Guddiga Qiyaasta iyo Canshuuraha waxaa loogu talagalay inay noqdaan kuraas muxaafid ah, oo hubiya in golaha magaaladayada iyo guddiga baarkinka (iyo mar uun nidaamka maktabaddayada, ka hor intaanan taas ku wareejin gobolka) ha Canshuur dhaaf muwaadiniinta. Halkii aan ka ahaan lahayn xubnaha guddiga muxaafidka ah, waxaan yeelannay kuwo dib -u -dhac ah dhowr iyo tobankii sano ee la soo dhaafay, taasoo naga horjoogsanaysa maalgelinta ahmiyadeena. Waa waqtigii isbeddelka.
Waan tusayaa Oo markaan soo muuqdo, waan dhammeeyey akhrinta. Ma ihi qof ku cusub geedi socodka xafiisyada iyo weydiinta su’aalaha faahfaahsan ee laga yaabo inay muujiyaan fursadaha hagaajinta. Mararka qaarkood kuwani ma aha wada hadal raaxo leh, mar walbana sax ma ihi, laakiin kalsoonidu waxay ku dhisan tahay falalka yaryar iyo waliba kuwa waaweyn. Anigu waxaan ahay Lix Sigma suunka cagaaran oo la xaqiijiyay (isku xira), taas oo macnaheedu yahay inaan ku qodmi ​​karo faahfaahinta: akhrinta buug -gacmeedka, dejinta daraasadaha, iyo fasiraadda xogta. Waxaan qorsheynayaa inaan ku kasbado kalsoonidaada si joogto ah anigoo kula wadaagaya faahfaahinta aan ku saleeyo go’aanadeyda.
Waxaa igu dhiirigaliyay inaan u tartamo xafiiskan sababtoo ah waxaan ku noolaa magaaladan, Lake Street, illaa 2020. Waxaan indhahayga ku arkay waxa aan nahay, iyo meesha aan si fiican wax uga qaban karno. Waxaan leenahay baahi aad u weyn oo ah maalgashi xag -jir ah – ma ahan garoomo isku mid ah iyo meelaha baabuurta la dhigto ee ku yaal badhtamaha magaalada, laakiin magaalada oo dhan, dhammaan waaxyada, waxaa jira meelo aan maalgashan karno oo aan isbeddel weyn ku samayn karno. Miisaaniyad uma dhigin si waafaqsan ahmiyadeena la sheegay – eber aragti, waddooyin dhammaystiran, sinnaan jinsi, wax ka qabashada xaaladda degdegga ah ee cimilada iyo kuwo kale – taasna waan beddeli karnaa.
Bishii Ogosto, waxaan arkay fursad aan ku sii fidi karo xafiiskan, si aan wax ugu biiriyo meesha aan awoodo, oo aanan uga leexan qaybtayda, waxaana sharaf ii noqon doonta inaan u adeego magaalada anigoo ka mid ah Guddiga.